BF Somalia oo maanta ku dhagan wasiir Fargeeti - Caasimada Online
Home Warar BF Somalia oo maanta ku dhagan wasiir Fargeeti
BF Somalia oo maanta ku dhagan wasiir Fargeeti
Muqdisho (Caasimada Online) – Baarlamaanka Federaalka ayaa ka doodaya dhaqaale xumada dalka ka jirta , gaar ahaan miisaaniyadda isdhintey ee dowladda iyo mushaar la’aanta shaqaalaha Dowlada.
Xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo kamid ah Mudanayaasha BF ayaa sheegay in ka doodista Dhaqaalaha uu yahay mid kamid ah Qodobada ugu muhiimsan ee la horkeenay Baarlamaanka, waxa uuna Tilmaamay inay kawar hayaan shaqaale iyo Ciidamo badan oo aan qaadan xuquuqdii ay ku lahaayen Dowlada.
Xildhibaanada ayaa isweeydiinaya waxa ka muhiimsan mushaaraadka shaqaalaha dowladda iyo askarta furumaha dagaalka ku jira ee aanan wax mushaaraad helin muddo 4 bilood ah oo xiriir ah, waxa ayna ku doodayaan in Dowladu gaar ahaan Wasiirka Maaliyada uu cadeeyo Mowqifkiisa ku aadan Mushaaraadka.
Wasiirka maaliyadda Maxamed Aaden Fargeeti, ayaa Xildhibaanada u sheegay in mushaarka lagu bixin jirey mashruuc uu taabbo galiyo bangiga adduunka, kaasi oo uu waqtigii loogu talogalay ka dhacay, balse hadda dib loo cusbooneysiiyey, isaga oo balanqaaday in shaqaalaha la siin doono mushaaraadkooda.
Sidoo kale, wasiirka ayaa BF ka codsaday inay muujiyaan dulqaad iyaga oo ka duulaayo dhaqaale xumida heysata Dowlada Somalia oo aan suuragalin Karin in wax waliba ay u dhacdo sidii loo baahnaa.
Dhanka kale, waxaa aad loo adkeeyay Amaanka Xaruunta ay ku shiraan Baarlamaanka Soomaaliya waxaana amaanka xarunta la wareegay Ciidamada AMISOM.